Ny pejin-tranonkala fampandrenesana fandikan-teny dia fiezahana marina handika ny hafatr'i Neal V. Frisby avy amin'ny toriteniny CD.
Baiboly sy horonana amin'ny sary
Horonan-taratasy ara-paminaniana PDF
Nugget ny horonan-taratasy ara-paminaniana
Boky Toriteny Nuggets
Fanomanana ny fiaingana
Ho avy tsy ho ela i Jesosy!
Ny pejin-tranonkala fampandrenesana fandikan-teny dia fiezahana marina handika ny hafatr'i Neal V. Frisby avy amin'ny toriteniny CD. Ny tanjona dia ny hamoronana fotoana bebe kokoa hahafahan'ny olona mifankazatra amin'ireo hafatra ara-tsindrimandry ireo indrindra ireo izay aleony mamaky toy izay mihaino ireo toriteny amin'ny alàlan'ny endrika CD audio.
Azafady mba ampandrenesina fa ny lesoka rehetra amin'ny fandefasana ireo hafatra ireo dia tsy natao ho an'ny hafatra tany am-boalohany fa ny lesoka tamin'ny ezaka fandikana izany; andraikitsika izany. Mamporisika ny olona hihaino ireo hafatra CD tany am-boalohany koa izahay.
Ireo olona maniry ny hahazo ireo CD audio, DVD ary bokin'i Neal Frisby tany am-boalohany dia afaka mifandray amin'ny biraon'i Neal Frisby avy amin'ilay rohy mifatotra - www.lefrisby.com Ho an'ny fanontaniana momba ireo fandefasana hafatra ireo dia alefa aminay amin'ny alàlan'ny adiresy fifandraisanay.
Efa any amin'ny faran'izao tontolo izao tokoa isika. Milentika amin’ity firenena lehibe ity sy izao tontolo izao ny masoandro. Tsy ho ela dia hanjavona ny fahafahana araka ny fantatsika. Tsy ho ela dia hifarana ny fahafahana mijoro vavolombelona amin’ity filazantsara marina ity. Nanomboka tamin’ny ady lehibe ho an’ny fahafahana sy ny zo hifidy ny tena tenin’Andriamanitra ity firenena ity. Araka ny hitantsika, dia misy fanenjehana lehibe mihatra amin’ny firenena rehetra izay mino an’ilay Andriamanitra marina. Amin’ity volana ity dia hanana teny manokana avy ao amin’ny tranombokin’ny Rahalahy Frisby isika, mba hitondrana ny maha-zava-dehibe ny fitoriana amin’izao ora farany izao. Andriamanitra dia miaraka amin’ny olony hanao asa haingana sy fohy ary mahery, satria izao no ora fakam-panahy izay voalazan’ny Soratra Masina matetika. Apok 3:10, “Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny fandeferako ianao, Izaho kosa dia hiaro anao ho afaka amin’ny andro fakam-panahy izay ho tonga amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany.” Ary izao dia teny iray avy amin'i Neal Frisby. Fotoana fijinjana tokoa izao! Izay ataontsika ho an’i Jesosy ihany no tena haharitra mandrakizay. Ny zavatra hafa rehetra eto an-tany dia ho levona na ho levona! – “Sarobidy eo anatrehan’Andriamanitra anefa ny fanahy mino! – Mety hamerina fahatsiarovana be dia be izany, saingy efa nandre ilay hiran'ny filazantsara taloha ianao hoe 'Mitondra ny amboara'. – Eny, tsy misy fotoana firy intsony hanaovana izany.” – “Tsy ho ela dia handohalika eo anatrehan’i Jesosy ny lohalika rehetra ary hibaboka araka ny Soratra Masina ny lela rehetra! Ny fijoroantsika ho vavolombelona sy ny famonjena fanahy no ho zava-dehibe indrindra amin’ny fotoana hahitantsika Azy! Fantany ny zavatra rehetra hataontsika tsirairay avy!” – “Lavitra ny andro, adiny aotra ny masoandro! Ny alina dia tonga toy ny aloka miparitaka amintsika! Hoy ny fahamaizinan'ny fanahy: miasa, dieny mbola misy mazava; fa tsy ho ela dia hanapaka ity planeta ity ny haizin’ny fahotana sy ny didy jadona”. Isa. 43:10, “Hianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, sady Mpanompoko izay nofidiko, mba hahafantaranareo sy hinoanareo Ahy ka ho azonareo tsara fa Izaho no Izy; Talohako dia tsy nisy Andriamanitra izaho!” Ao anatin'ny oran'ny hery fanerena hiditra amin'ny lalambe sy fefy isika! Efa ho tapitra ny fanasana amin'ny fiantsoana ny sakafo hariva! – “Henoy ny tenin’i Jehovah; fa efa antomotra ny fahoriana lehibe efa nambara mialoha. Toy ny mahita rahona avy eny lavitra eny, dia toy izany no hanjo tampoka amin’ny firenena izay nanadino ny Mpamorona azy!” – Haingana ny mahatoky ary ny tany hatolotra ho an’ny tsy marina sy ny ratsy fanahy! Isika dia amin’ny ora izay nilazany hoe: “Dia nanisy fijinjana niaraka tamin’izay Izy, fa tonga ny fararano!” ( Marka 4:29 ) Izany dia mampiseho fa asa haingana sy haingana ary fohy izy io. Araka ny nolazainy hoe: “Indro avy faingana Aho.” - Ho tampoka sy hitranga haingana ny fampisehoana hetsika! – Fahagagana tsy nampoizina ho an'izao tontolo izao. Ary tampoka teo dia ho fantatry ny adala fa lasa ny olom-boafidy! “Koa amin’izao fijinjana ny ranonorana farany izao dia manomboka ny asany lehibe indrindra sy lehibe indrindra!” Tokony hanana vavaka ao am-pontsika isan’andro isika rehefa mitondra ny zanaky ny Tompo farany amin’ny herin’ny Fanahy Masina. Mandeha amin’ny fisehoan-javatra manaitra sy tsy ampoizina izao tontolo izao mba hanatanterahana ny faminaniana momba ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana mpivadi-pinoana ratsy fanahy! Momba ireo lohahevitra ireo sy ny asa fijinjana ny filazantsara, ny Tompo dia manatanteraka ny faminaniana sy manome famantarana isan-karazany hanamafisana ny maha akaiky Azy! “Ny lanitra dia manambara izany, famantarana eny amin’ny ranomasina, ary ny afon’ny volkano amin’ny tany dia manambara izany koa!” Mirohondrohona ny ranomasina ary mihorohoro ny tany! Firenena maro no efa very saina. Fotoana mampidi-doza! Fa fantatsika ihany koa fa aorian'ny krizy ara-toekarena dia milaza ny Baiboly fa ny mpanao didy jadona dia hitondra fanambinana eran-tany sy fiovana goavana ao anatin'izany ny rafitra. (Dan. 8:25) – Fantatsika àry fa eto an-tany ny aloky ny Andriana romanina iray ary vonona ny hitsangana! Ho avy tsy ho ela koa ireo hetsika manan-danja sy amin'ny andro ho avy. Aoka ho azo antoka ary diniho ny andro ho avy fa Andriamanitra dia haneho famantarana ara-paminaniana maro momba ny fahataperan'izao tontolo izao! – “Ny antso mamatonalina dia mananontanona ny olom-boafidiny”. – “Azo antoka fa izany rehetra izany dia ampy hahatonga ny kristiana tsirairay ho mailo sy ho mailo. Mba misy famantarana na aiza na aiza dia lazao aminay fa efa eo am-baravarana Izy!” Teny farany. Ity taratasy ity dia tokony hahatonga ny Kristianina rehetra hahatsapa fa tena ilaina tokoa ny fitoriana, ary tokony hanao izay fara heriny ny rehetra. Amin’ity volana ity isika dia mamoaka Boky Voalohany – Bokin’ny Taratasy Isam-bolana (Jona 2005 ka hatramin’ny Jolay 2008) ary koa DVD tsy manam-paharoa hoe “Izay Tiana”. (Jereo ny tolotra etsy ambany.) – Ny fahatokisana ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia hanohy ny fanohanan'izy ireo manan-danja ity hafatra tena ilaina ity. Nomen’Andriamanitra fitahiana mahatalanjona izay rehetra nijoro tao ambadik’io asa fanompoana io. Tena mankasitraka ny fanohanana rehetra nomena an'ity ministera ity aho. Betsaka ny fanahy efa voavonjy sy nampandrenesina amin’izao ora farany iainantsika izao.
Lahatsary sy Audios
CLICK NY LOHATENY
Fijoroana vavolombelona momba ny lanitra sy ny helo
Mpangalatra amin'ny andiana alina
Famporisihana Neal Frisby
Ohatra amin'ny fandikan-teny
Voatifitra ny fahagagana kristiana sitrana
Kitiho eto ny Baiboly sy ny horonana amin'ny sary
Ireo horonan-taratasy ara-paminaniana nataon'i Neal Frisby
Azo alaina amin'ny volume I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ary X izao
Mangataha bokikely mahafinaritra anao izao!
Ho an'ny boky, CD ary horonan-tsary
Raha any Afrika, ho an'ireo boky sy Trakta ireo
na antsoy + 234 703 2929 220
na antsoy + 234 807 4318 009
"Rehefa lasa isika dia hino ve izy ireo."
Copyright © 2020 Fanairana ny fandikan-teny Theme. Zo rehetra voatokana.
nataon- Tiyan Software Development Company